Ekuseni, isidlo sesinkwa, ngokuqinisekileyo, siya kunceda umntwana. Kunikezelwa ukuba uyilungise ngokuchanekileyo. Ngothando. Malunga naziphi i-porridge ezisetyenziselwa ukutya kwasekuseni kubantwana kwaye kutheni, kwaye ziya kuxutyushwa ngezantsi.
Ixesha lokutya lokuqala lithatha malunga neenyanga ezintandathu. Njengomthetho, iingcali zincoma ukuba ziqale nge-puree yemifuno (kubantwana abancinci), okanye kunye nezolimo (kubantwana ababuthathaka, abancinci). Kutheni? Inyaniso kukuba le mveliso ifaneleke ukuba ithathwe ngumzimba womntwana. Ngendlela, kunokwenzeka ukuba iingcambu zeengcebiso ezinjalo zibuyela kwixesha elidlulileyo. Cinga nje: i-porridge ibeke isiseko kwizinto ezininzi zokutya zehlabathi!
Ingqolowa, ibhali, i-millet, i-rye, nakwiimbali zamandulo kunye neengcamango ze-Slavs zikhankanywe njengezinto eziphambili zokutya kokubantwana nabakhulu. Akunjalo ngenxa yokuba ookhokho bethu babengenakho ukutya. I-porridge nje iluncedo, ngokukrakra ngokukrakra kwaye okunomsoco kwaye, ngaphezu koko, ikulungele lula. Ukongezelela, ba ... bonyango, ngoko akufanele uwashiye. Akukho!
Inyaniso yokuba i-croup iqukethe i-carbohydrate eninzi, inyaniso eyaziwayo. Kanye kunye nokuba i-carbohydrate iyimithombo yamandla emzimbeni. Ngoko ke, banceda kakhulu ukutya kwasekuseni kubantwana. Ukongezelela, ukutya okutya kukutya kwendawo yokugcina i-macro kunye ne-microelements kunye namavithamini. Kodwa elowo lixabisekileyo ngendlela yalo.
Iiprotheni, isitashi, amafutha enempilo. IiVithamini B1, B2, B6, PP. Izinto ezincinci: i-phosphorus, isinyithi, i-magnesium, i-potassium ... Oku akusiluhlu olupheleleyo lento esi sivuno. Ndiyabulela konke oku aphilisayo! I-buckwheat porridge iyanciphisa umngcipheko wesifo senhliziyo, isusa i-cholesterol engaphezu komzimba.
Le cereal ngumnini werekhodi kumxholo wesitashi (malunga ne-77%). Kwakhona inevithamini E, PP. iqela B kunye ne-acid aclic. Le ndlela yokugqibela iyindlela yokukhusela i-anemia. Ilayisi isebenza kakuhle ngeengxaki zesisu.
Kukho iiprotheni ezininzi kwi-oatmeal. Kwaye imifuno yemifuno ngokubanzi iphantse ngokuphindwe kabini nakwi-buckwheat, 5.8%! Indawo yokusetyenziswa kwemithi ye-oatmeal inkulu. Ukuqhekeza kuyo, kunye ne-porridge, kunceda ngokugqibeleleyo ngezifo zesisu, isifo sikashukela, ukuvuvuka kwesibindi.
Inokubaluleka ngenxa yomxholo ophezulu weeprotheni, amafutha, i-carbohydrate, iivithamini A, D, E kunye neemaminerali. Kulo mveliso ukhiqiza ipararl neerley groats. Kule ndlela yokugqibela, i-fiber ephezulu, enceda ukulahla ukuqothulwa. Ngendlela, i-decoction yebhali okanye i-pearl yebhanki inokulungele ukukhwehlela. Inesenzo esiphezulu kunye nesigqubuthelo.
Ukutya kwesidlo sasisidlo sakusasa kunye nesidlo sakusasa sabantwana, kufuneka ukwazi ezinye iimfihlelo zokutya. Ngoko, okokuqala, i-groats kufuneka ihlulwe. Emva koko kufuneka ihlambuluke. Ilayisi, i-millet ne-pearl yebhalile kuqala ngamanzi afudumele (malunga ne-10 ° C) kwaye ishushu (60 ° C). Ibhalley ihlanjwe ngamanzi amancinci. Ngaba i-karapuz ithande i-buckwheat okanye ingqolowa? Ukuze ukwenze udideke, unako ukukhawuleza ukukhawuleza.
Kukho mfihlelo enye. Ukuba i-croup ingaphambi kokugubungelwa iiyure eziliqela, iya kupheka ngokukhawuleza. Ingaba isigaba sokulungiselela sizalisekile? Siya kuhamba ngqo kumalungiselelo. Phalaza amanzi epanini. Xa ithemba, galela i-rump. Gxuma ubushushu obude uze ubambe onke amanzi. Ixesha kunye nebhotela. Unako ukuthulula ubisi (ukuba unqwenela). Khonza kwindawo ephambili enesilwanyana esilula.
Ukongeza kwimiqolo yesisindo esivamile, ungathenga ii-porridges zokuveliswa kwemveliso kwisebe lokutya kwabantwana namhlanje. Zenzelwe abantwana abancinci. Musa ukukhathazeka malunga nomgangatho wabo - i-porridge enjalo isetyenziselwa ukutya kwasekuseni kubantwana. Kwi-package nganye enemibala kuyimfuneko ukubonakalisa kuphela ukubunjwa, kodwa kunye nobudala bomntwana, apho le mveliso yenzelwe. Kukho amanye amanqaku afanelekileyo. Kule mijelo umxholo we-macro-, microelements kunye neevithamini ezibalulekileyo. Ziyimveliso yobisi kunye nobisi, ukusuka kwesinye isonka kunye nakubininzi. Kwaye kunye neziqhamo! Ukongeza, zivelisa ukutya okukhethekileyo: ukukhusela i-dysbacteriosis (kunye ne-bifidobacteria), ukuze ubuthongo obuhle ... Ulungele! Maneka! Kuhlwaya! Anikholwa mna? Zama wena! Kodwa akukho konke. Iikati zoshishino zikulungele ukutya. Ungathinti kwaye uhlambe i-rump. Ngokuqhelekileyo, akufuneki ukupheka. Kwanele nje ukucoca umxube uze udibanise iphalaji. Ungakulibala ukukhupha ngokucophelela ukuze kungabikho izilwanyana. Yaye unako ukunikela unyana wakho okanye intombi yakho! Ekuqaleni, okwenyani, thatha kuphela i-drop drop of tea. Emva koko, ube ne rasprobovav, vula umlomo uze ucele ngaphezulu. Ngubani ongathandi le yummy?
UKUQHUBA: 50 amagremu elayisi, 1 i-carrot ephakathi, ama-inflorescence ama-3 e-broccoli, i-1 teaspoon ye-sunflower okanye ioli yegesi, ama-gramu ama-50 we-veal veal, 2 tablespoons. iipuni ze-milk formula
UKUSEBENZA: Ilayiti, uthele i-200 ml yamanzi, uvuthe umlilo. Imizuzu engama-10 ngaphambi kokutya, ufake i-broccoli kunye neekroti. Yibilise ngokwahlukileyo inyama, iphihlize. Yilungile irayisi kunye nemifuno ifaka ngemfoloko, faka umxube wobisi, ibhotela kunye nenyama. Hlanganisa kwaye uzise kwimathumba. I-porridge enjalo isetyenziselwa ukutya kwasekuseni kubantwana, ukususela kwiinyanga ezintandathu.
Isondlo somfazi onesihlengikazi ngenxa yokugula komntwana
Ubumba obuncedo kubantwana abancinci
Izitya ezihlwaya kunye nezempilo zengane
Indlela yokudibanisa isondlo somntwana emva konyaka?
Intombazana yaseBrazil u-Olga Kurylenko
Izakhono zokuphuhlisa ubulili besini
I-Pirogue ene spaghetti kunye nenkomo yomhlaba
Umntwana omncinane udla ngokukhala
Indlela yokukhulisa umntwana onzima
Ukuhlamba ikhumba elinamafutha: iigel, iifumba, izihlahla